Kama ahụkarị na-amalite-na-a-oghere-peeji nyiwe ebe m na-elekarị anya ma ọ bụ na-agagharị na forntanetị maka echiche, Canva na-ewe gị site na usoro dị iche iche na usoro mmụọ nsọ nke na-enye ihe ọmụma. Canva ewe ewepu oghere peeji ma nye gi otutu echiche iji mejuputa uzo ozo. Enweghị mkpa ịlele eserese nyocha, ha na-echekwa ya na mkpuchi pọdkastị, onyonyo mgbasa ozi mmekọrịta, ihe ngosi, akwụkwọ mmado, mkpuchi Facebook, foto Facebook Ad, Facebook post, Facebook App image, blog graphic, document, card, Twitter post, òkù, kaadị azụmahịa, Twitter nkụnye eji isi mee, pinterest post, ezigbo ala na ụlọ flyer, Google+ cover, Kindle cover, na foto collages. Laati ha gụnyere gụnyere ụfọdụ nnukwu ihe ọmụma dị na peeji nke!
Canva aghọwo ihe ikpo okwu ugbu a ma nye ya Igodo Canva iji jikọta ngwá ọrụ ha n'ime ikpo okwu gị. Enweghị nchekasị maka iwulite ngwaọrụ nke gị iji dezie atụmatụ… naanị tinye bọtịnụ yana iji mwekota, ị dịla njikere ị ga!